» Tafaftiraha Waagacusub oo shirkadda Dahabshiil Maxkamad uga guuleystay + Document
Tafaftiraha Waagacusub oo shirkadda Dahabshiil Maxkamad uga guuleystay + Document
Dec 17, 2012 - 2 Jawaabood	Tafaftiraha guud ee warbaahinta Waagacusub Ahna Gudoomiyaha Ururka Isutagga Wariyayaasha Soomaaliyeed ee Associated Somali Journalists Daahir Cabdulle Calasow, ayaa shirkadda Dahabshiil kaga duuleystay dacwad ka socotay maxkamad ku taala wadanka Holland.
Qareenka u doodaya shirkadda Dahabshiil, ayaa warqad qoraal ah oo uu u gudbiyey maxkamadda ay dacwadda ka socotay ku sheegay in uu ka codsaday shirkadda Dahabshiil in ay si degdeg ah ku bixiso lacagaha baxay intii ay socotay dacwadda.
Qareenkaan, oo lagu magacaabo Olaf Trojan, ayaa xusay in Dahabshiil aysan si toos ah u sheegin xilliga ay bixin doonto lacagaha ku baxay intii ay socoto dacwadda.
Qareenka, ayaa isla qoraalka uu u diray maxkamadda ku sheegay in ay suuragal tahay in shirkadda Dahabshiil ay qaadato go’aan ay racfaan kaga qaadaneyso go’aankii ay maxkamadda ka gaartay dacwaddii ka dhanka aheyd warbaahinta waaga-cusub, inkastoo haddii ay shirkada Dahabshiil racfaan ka qaadato go’aankaan mar kalena ay ku guul-dareysatay dacwadeeda ay bixin doonto lacag malaayin dollar ah oo ka badan midda haatan laga doonayo.
Qareenka ayaa si qar iska tuurnimo ah ku hanjabay in ay dacwado kale ku soo oogi doonaan tafaftiraha shirkadda warbaahinta waagacusub haddii uu daabaco warbixino ku saabsan shirkadda DAHABSHIL.
Waa markii labaad oo Daahir Calasow uu dacwad kaga guuleysto shirkadda Dahabshiil.
Riix Halkaan si aad Docment Cadeyn ah u aragto
Wararka@hotmail.com « Warbixinta Ka HoreysayCiidamo Nabad sugid ah oo naftooda la baxay iyo midkood oo la dilay	Warbixinta Xigto »Soo dhaweyntii Madaxweyne Xasan ee Jabuuti + daawo SAWIRRO	2 Responses to Tafaftiraha Waagacusub oo shirkadda Dahabshiil Maxkamad uga guuleystay + Document
Maxamed cabdullahi xamari says:	December 20, 2012 at 4:24 pm	A.S.C Marka Hore Waxaan Salamayaa Shabakadda MuqdishoNews. marka Xiga Waxaan Leeyahay Illahayow Somaali U Gargaar,Illahayow Umadda Somaliyeed Culayska Ka Qaad Wa Bilaahi Tawfiiq.
Log in to Reply	abduqadir yare says:	January 26, 2013 at 9:56 pm	waxan layabanahay waxa ka dhaxeya dahir calasow & dahabshiil maxa ka dhaxenkara bal isweydiya mise wa somali waxa lagu yaqana?